Isandla Windows 10 Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo
Uninzi lweendlela ezimfutshane ezinqumlayo zekhibhodi kwiLaptop yakho zibandakanya isitshixo seWindows. Kubhalwe uphawu lwewindows, kwaye kubhekiswa kuyo njengeqhosha lokuphumelela. Iindlela ezinqumlayo ezininzi zokuphumelela zilungile ukwazi, ngakumbi kwilaptop apho ukusebenzisa ikhibhodi kunokuhlala kukhawuleza kunokusebenzisa iphedi yokuchukumisa okanye ukufumana imouse yangaphandle.
Nazi izinto ezilishumi eziluncedo Windows 10 iindlela ezimfutshane:
Phumelela + A: Bonisa iZiko lokuSebenza. Ukuba une-PC yeCwecwe, ukuswayipha isikrini sokuchukumisa usuka kwicala lasekhohlo lesikrini ngaphakathi uyakhawuleza, kodwa u-Win + A uyasebenza ukuba izandla zakho sele zingaphezulu kwekhibhodi.
Phumelela + D: Bonisa i-Desktop. Le ndlela imfutshane ayisebenzi xa ilaptop ikwiMowudi yeThebhulethi.
Phumelela + E: Vula iwindow yeWindows Explorer, ngakumbi kwiFestile yoFikelelo oluKhawulezayo.
Phumelela + Mna: Vula usetyenziso lweesetingi.
Phumelela + L: Tshixa ilaptop. Nangaliphi na ixesha uvuka ushiye ilaptop, nokuba uyipela elifutshane, yitshixe. Lo myalelo yinxalenye ebalulekileyo yokhuseleko lweelaptop.
Phumelela + O: Cima okanye uvule inqaku lokuZenzekelayo. Xa ujikeleziso oluzenzekelayo luvuliwe, isikrini seKhompyuter yeThebhulethi siyatshintsha ukuqhelaniswa kuxhomekeke kwindlela osiphethe ngayo isixhobo. Xa ujikeleziso oluzenzekelayo lutshixiwe, isikrini sihlala kulungelelwaniso lwangoku.
Phumelela + P: Khetha indlela yokuphatha esweni ngonaphakade okanye iprojektha. Izinketho ezine ziboniswa kwipaneli yesilayidi.
Phumelela + S: Veza iwindow yokukhangela kwiwebhu, apho unokujonga khona iminyhadala okanye usebenzise iBing ukukhangela i-Intanethi.
Phumelela + U: Veza iZiko loFikelelo lokuFikelela, apho iisetingi zinokwenziwa ngokulula ngakumbi zisebenzisa ilaptop.
Phumelela + X: Biza imenyu efihlakeleyo, apho ufumana iindlela ezimfutshane kwiindawo eziqhelekileyo kwiWindows, njengePaneli yokuLawula.
Zibulala njani iintsholongwane
yintoni eyenza isivakalisi esipheleleyo
iingono ezibuhlungu ngexesha
Ngaba i-ethanol ayilunganga kuwe
Imithambo esecaleni kunye ne-medial pectoral nerves
Iziphumo ebezingalindelekanga zesildenafil citrate